टंक आङबुहाङलाई २४ घन्टे स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशन
विराटनगर । माओवादी केन्द्रको प्रदेश १ संसदीय दलले नवनियुक्त आर्थिक मामिला मन्त्री टंक आङबु्हाङलाई २४ घन्टे स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता समेत रहेका आङबुहाङ एमाले प्रवेश गरेर मन्त्री भएका छन् । उनलाई आज दलका प्रमुख सचेतक झलकबहादुर मगरले २४ घन्टाभित्र दल त्याग गरेको हो होइन ? दलको विधान विपरित गतिविधिमा सामेल भएवापत कारवाही किन नगर्ने ? लगायतका प्रश्न राखेर प्रष्टीकरण सोधेका छन् ।
हिजो सम्पन्न दलको बैठकले इन्द्र आङबोलाई दलको नेता चयन गर्दै आङबुहाङलाई प्रष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो ।
मङ्गलबार, १७ चैत, २०७७, दिउँसोको ०४:३३ बजे